धर्म निरपेक्षता विरुद्धको विज्ञापन छाप्ने मिडियालाई पाँच प्रश्न – Media Kurakani
August 25th, 2015 Media Kurakani Media Watch
रातोपाटीमा छापिएको ब्यानर विज्ञापन
काठमाडौंबाट छापिने केही दैनिक पत्रिकाले मंगलबारका अंकहरुमा धर्म निरपेक्षता खारेजीको मागसहित हुन लागेको ‘२४ घण्टे शान्तिपूर्ण सत्याग्रह’ सम्बन्धि विज्ञापन महत्वका साथ प्रकाशन गरेका छन्। नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक तथा नयाँ पत्रिका दैनिकले धर्म निरपेक्षता खारेजीको माग सहित बुधबार हुन लागेको कार्यक्रमको विज्ञापन छापेका हुन्। यस्तै रातोपाटी डट कमले समेत उक्त विज्ञापनलाई ब्यान बनाएको थियो।
नागरिकले दोस्रो पेजमा आधा पेज ढाकिने गरी विज्ञापन छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट र नयाँ पत्रिकाले त्यति नै स्थान दिएर तेस्रो पेजमा विज्ञापन छापेका छन्। संविधान निर्माणसँग जोडिएको गम्भीर विषयलाई विज्ञापनका रुपमा छाप्न हुन्छ वा हुँदैन? यो बहसको विषय हुन सक्छ। हामीले यो विज्ञापन छाप्ने मिडियालाई यही लेखमार्फत पाँच प्रश्न गरेका छौः
१) तपाईँहरुसँग नैतिकता भन्ने चिज छ? संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई पैसा पाएँ भन्दैमा विज्ञापन बनाउने?
२) कामना गरौँ, यस्तो कतै नहोस् तर एउटा अनुमान भोलि ‘हिन्दूवादी’ समूहले कहीँकतै वा कसैलाई आक्रमण गरे भने विज्ञापन छाप्ने मिडियाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ या पर्दैन?
३) यस्तो गम्भीर अवस्थामा स्वार्थ समूह (धार्मिक/जातीय वा राजनीतिक आदि) हरुबाट पैसा लिएर विज्ञापन छाप्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिने कि नदिने?
४) यस्तो गम्भीर अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
५) सम्पादक ज्यूहरु, धर्म निरपेक्षता अन्तरिम संविधानले नै स्वीकारेको छ। अब बन्ने संविधानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई तपाईँ ‘विज्ञापनमात्र त हो नि’ भनेर उम्कन पाउनुहुन्छ?
तपाईँको पालोः अन्य पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन वा रेडियोले यो विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गरेका छन्? हामीलाई जानकारी दिनुस् कमेन्ट गरेर। वा mediakurakani@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस्। विवादित विषयमा मिडियाले यसरी विज्ञापन दिन मिल्छ? आफ्नो विचार लेख्नुहोस्।
Tags Advertising Annapurna Post Ethics Nagarik Daily Naya Patrika Rato Pati Social Responsibility
कैलालीको हिंसात्मक घटनापछि प्रेस काउन्सिलको आग्रहः मिडिया र पत्रकार जिम्मेवार बन्नुस् »
« लौ आयो ताजाखबरः नामै नसुनेको अनलाइनले पछार्‍यो इकान्तिपुरलाई !
आफूले विज्ञापन पाएन भनेर रिस पोखेर कुन्ठा पोखे जस्तो लेख भयो !
Dashrath Shrestha (#)
कामना गरौँ, यस्तो कतै नहोस् तर एउटा अनुमान ‘हिन्दूवादी’ समूहले कहीँकतै वा कसैलाई आक्रमण गरे भने विज्ञापन छाप्ने मिडियाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ या पर्दैन?